DHAGEYSO: M/weynaha Somaliland ‘Muuse Biixi’ oo si kulul ugu jawaabay hadalkii Madaxwenyne Farmaajo oo.. – HalQaran.com
DHAGEYSO: M/weynaha Somaliland ‘Muuse Biixi’ oo si kulul ugu jawaabay hadalkii Madaxwenyne Farmaajo oo..
Hargeysa (Halqaran.com) – Madaxweynaha Somalilnad, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii uu Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xalay sheegay ee ahaa in Somaliland asyan ka go’een Soomaaliya inteeda kale.
Mar uu xalay Madaxweyne Farmaajo marti ku ahaa barmaamij Dood Cilmiyeed oo uu soo agaasimay Machadka Raas ayaa sheegay in midnimada Soomaaliya ay tahay muqadas, balse Somalinad muddo 30 sano ah aqoonsi raadinayaan welina helin, islamarkaana aysan jirin wadan Afrikan ah oo kala go’aya.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo Axadda maanta ah soo xirayay tababar macallinimo ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uusan ka hadli Karin Midnimada Soomaaliya, islamarkaana isaga uu yahay qofka wax ka socon la’yihiin.
“Shantii Soomaaliyeed inay midoobaan reer Somaliland kow bay ka yihiin, laakiin Caqliga siyaasiyiinta Xamar jooga iyo 5 madaxeyne ma yahay kii Soomaali isu keeni lahaa?… Farmaajo waxa aan leeyahay ha tilmaamin midnimo waa adigii taababka u jaraye”.
Ugu dambeyn, Somaliland ayaa aamisan inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale, welina mahin aqoonsi, balse ay xusid mudan tahay in aysan ku shaqeyn amarada kasoo baxa Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Halka hoose ka dhageyso Codka Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi:
Tags: Hargeysa, Midnimo, Muuse Biixi oo u jawaabay Farmaajo, Somaliland, tababar macallimiin
Prime Minister ‘Roble’ officially takes over office +(PHOTOS)
DHAGEYSO: R/W Rooble oo sheegay in uu si deg-deg ah wax uga qaban doono Kufsiga Haweenka & Carruurta